musha > Travel Europe > Beach Holidays By Train In Belgium
Nokuti nyika duku, Belgium ine akanaka mugove yomufaro chitima nzendo dzakawanda zvinoshamisa pamberi kuona. MuBelgian Mahombekombe iguru nzira dzokuzorora uye vanakidzwe pamushana uye 65 makiromita kubva pamhenderekedzo, pane zvakawanda mabasa inonakidza yegungwa kuti zvorudzi. Tora kuzorora kwakazara uye kubata chitima nokwawaienda rwokusarudza. Hezvino zvimwe yakanakisisa Beach mazororo nechitima kuBelgium.
Kana iwe uchitsvaga iro rakakwana zuva rekubuda kuenda kumahombekombe saka ino ndiyo nzvimbo yekushanyira. Uyewo sevatsigiri "Guta paGungwa", Ostend ane pamusoro 9 makiromita dzakanaka jecha mahombekombe vakagadzirira sunbathing. Panewo chikuru promenade uye zvakawanda mamiziyamu, zvitoro, uye mumaresitorendi muguta. From 28 June kusvikira 31 August gore negore Ostend anoridza nehondo kusvikira Sand Sculpture Festival riri mijenya kunakidza! chete pfupi chitima tasva kubva kweBrussels, Ostend akakwana kuti chiitiko pamahombekombe-guta.
KweBrussels kuna Ostend Zvitima
Antwerp kuna Ostend Zvitima
Amsterdam kuna Ostend Zvitima
Bruges kuna Ostend Zvitima
Kana iwe kusvetukira muchitima muna kweBrussels uchawana uri Knokke-Heist kumativi 50 maminitsi Papera. Pano hapana chete, asi 5 mahombekombe anoyevedza kumirira iwe. nzvimbo iyi ine chinhu vose, kusanganisira imwe kosi gorofu, unyanzvi namaberere, mumwe kasino, tsika tsika uye zvinoshamisa zvisikwa akadana Zwin. Nezvinhu zvizhinji zvakadaro kuita iri pamahombekombe zororo hwakakodzera achitora.
KweBrussels kuna Knokke-Heist Zvitima
Antwerp kuna Knokke-Heist Zvitima
Amsterdam kuna Knokke-Heist Zvitima
Bruges kuna Knokke Zvitima
Nokuti vaya vari kupfuura zvarisingazivi, De Hann dzisina chinhu pfungwa huru. Chete pfupi chitima kukwira kubva kweBrussels, guta rino yegungwa inopa zvinoshamisa kumahombekombe ne zuva Chair uye pasiri zvikamu pamhenderekedzo iripo nokuda rendi, naizvozvowo fadza Britain-Norman manyorerwo anamapako uye dzimba. Zvinokwanisika rendi bikes uye kutenderera mumugwagwa kana mumhenderekedzo yegungwa nzira uye vanofarira girl uye vava mhepo. nokuti panze ruzivo, ichi chi nzvimbo yakakwana.
Rinonzi Ghent kuna Ostend Zvitima
Charleroi kuna Ostend Zvitima
Lille kuna Ostend Zvitima
Liege kuna Ostend Zvitima
Izvi kuti pakupedzisira pamhenderekedzo kuenda kuBelgium vamwe mafaro mhuri. Zvakanaka-yaizivikanwa-siyana mvura mitambo akadai Paddling uye kushambira, chikepe nzendo, chaienda, hove, chinozunguzirwa carting uye Surfing, uyewo dzakawanda kutandara zvivako pamwe pamhenderekedzo uye motokari isina promenade, Nieuwpoort rinopa chinhu wose. guta rino zviri nyore kuwana kubva kweBrussels uye pfupi chitima tasva achawana iwe ikoko.
Bherujiyamu ane zvinoshamisa yegungwa uye nyore kuwana nezvitima anoita kuwana ikoko ose kunakidza uye kunokonzerwa vakasununguka! Pane pamahombekombe rwendo huenderane wose uye nguva dzose chinhu chitsva kuedza. Chii chingava nerujeko pane imwe izvi Beach mazororo nechitima kuBelgium?
Rinonzi Ghent kuna De Panne Zvitima
Charleroi kuna De Panne Zvitima
Liege kuna De Panne Zvitima
Enda Saveatrain.com kuongorora zvose yedu oga nezvitima fares uye kutanga kuronga yako inotevera ushingi!
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeach-holidays-by-train-in-belgium%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#Beach zororo travelbelgium